लघुकथाः चरित्र » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आईतवार, जेष्ठ २०, २०७५ १५:१८ मा प्रकाशित !
निकै लामो दौडधूप र केन्द्रीय नेताहरूको परिक्रमापछि वीरबहादुरको जिल्ला स्तरको नेताबाट केन्द्रमा बढुवा भयो । उसको अनुहारमा मुस्कानको लहर दौडन थालेको थियो । ऊ अब उमङ्गको पङ्खा हम्केर बस्न थालेको थियो ।
उसको बढुवासँगै उसको दिनचर्या पनि बदलियो । ऊ अब सधँै अन्तक्र्रिया, गोष्ठी, सेमिनारमा व्यस्त हुन थालेको थियो । सधैँ निराशाको आसनमा रहने ऊ अचानक खुशी देखिन थालेको थियो ।
उसलाई पत्रकारहरूले पनि प्रखर वक्ताका रूपमा स्वीकार्न थालेका थिए । घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचविखन, लागू औषधजस्ता सामाजिक विकृतिका बारेमा ऊ सशक्तरूपमा भाषण दिन थालेको थियो ।
एक दिन खुलामञ्चमा महिला हिंसा विषयक एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो । कुनै ठूलै एनजीओद्वारा प्रायोजित उक्त कार्यक्रममा उसलाई पनि वक्ताका रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो । उसको पालो आउनासाथ उसले मञ्चको अग्रस्थानमा उभिएर अति जोसिलो भाषण ग¥यो:
“आदरणीय जनसमुदायहरू, आज हामी अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छौँ । आज हामीमाझ परम्परागत कुरीति, विकृति, विसङ्गतिले गर्दा देशको विकास हुन सकिरहेको छैन । बालविवाह, यौन दुव्यवहार र दाइजो प्रथाले गर्दा महिला दिदीबहिनीहरू आक्रान्त बनेका छन् । उनीहरू आत्महत्या गर्न विवश छन् । जिउँदै जलाइएका छन् । जबसम्म महिलाहरू सशक्त हुँदैनन्, जबसम्म उनीहरूको आत्मसम्मानलाई सबैले स्वीकार गर्दैनन् तबसम्म देशको विकास हुँदैन । म यति भन्दै…”
उसको भाषण सकिने वित्तिकै दर्शकदिर्घाबाट आएको तालीको गडगडाहटले वातावरण नै उत्साहित भयो । मानिसहरूले नेता हुनु त वीरबहादुर जस्तो हुनु भनेर खुलेरै प्रशंसा गर्न थालेका थिए । यस्तो नेता भए मात्र देश विकास हुन्छ भनेर सबैले तारिफ गरे ।
तर ताली पिटिरहेका ती विचराहरूलाई के थाहा ! बिहेमा दाइजो ल्याउन नसकेकी र छोरी मात्रै जन्माएकी भनेर चरम यातनाकासाथ घरबाट निकालिएकी वीरबहादुरकी श्रीमती दर्शकदीर्घाको पछाडि बसेर तीनवटी छोरी च्यापेर रोइरहेकी थिई ।
बागमती ११, कर्मैया, सर्लाही
आउ ! सक्छौ भने – पर्दा खोल,दाँत भाँच-यमुना
जितेन राई को” क्षितिज पारीको डाडाबाट” सार्बजानिक(भिडियो सहित )
PREVIOUS POST Previous post: बोनस र हकप्रद सेयरको पुँजीगत लाभकर आजबाट बढ्यो
NEXT POST Next post: सन्दीपलाई एकपछि अर्को सफलता, क्यानेडियन लिगमा छनौट
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, जेष्ठ २०, २०७५ १५:१८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, जेष्ठ २०, २०७५ १५:१८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, जेष्ठ २०, २०७५ १५:१८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, जेष्ठ २०, २०७५ १५:१८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, जेष्ठ २०, २०७५ १५:१८